MonsterConnect: Lezienụ ndị ahịa gị ka ọ mechie, ọ bụghị kpọọ | Martech Zone
MonsterConnect: Kụọ ndị ahịa gị ụgwọ ka ha mechie, ọ bụghị kpọọ
N'ịbụ ndị na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ SaaS na ndị ahịa na-apụ apụ, ọ bịara doo anya nke ọma na uto nke ụlọ ọrụ ahụ dabere na ikike anyị maka ndị nnọchi anya anyị mechie azụmaahịa ọhụrụ. Ma, ọ bụghị ihe ijuanya na enwere mmekọrịta dị n'etiti onye na-ere ahịa outbound oku olu na ọnụego ahịa ha mechiri emechi.
Ọ bụrụ na nke ahụ na-enye gị echiche uche nke ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-ekwu okwu na atụmanya ọ bụla 30 sekọnd ma kwụgidere mgbe ha jụrụ, nke ahụ abụghị ikpe ma ọlị. Imirikiti nsogbu ahụ anaghị akpọ ekwentị, ọ na-ejikọta ya na onye na njedebe nke ọzọ. Usoro ndozi akpaaka na-aga nke ọma naanị n'ihi ebumnuche ole na ole:
Nchekwa onwe ịpị teknụzụ enweghị ike ịnyagharịa osisi ekwentị.
Nchekwa onwe ịpị teknụzụ enweghị ike soro ndị nche ọnụ ụzọ na-emekọrịta ihe.
Nchekwa onwe ịpị teknụzụ enweghị ike ọdịiche dị n’etiti ozi olu na ekwentị na-akpali.
Teknụzụ ndị ọzọ dị ebe ahụ na-enyefe usoro ihe omume gị na ọpụpụ B2B ndu ọgbọ ụlọ ọrụ. Nke a nwekwara ike ịga nke ọma, mana ugbu a dabere na ndị ọrụ mpụga iji nweta mmasị na atụmanya gị. Ebumnuche ya chọrọ mkparịta ụka abụọ na ntụgharị abụọ… otu iji nweta oge a ga-eme ya, nke ọzọ achọ mechie ire ere.
Njikọ Monster agwakọta web-dabeere na ngwa na ndị ọrụ ndụ na dikpọ oku ke ukem na gị ahịa uloru. Ka kọntaktị gị akọwapụtara ruru, ha na-ejikọ ya na ahịa ahịa gị ozugbo maka mkparịta ụka ndụ. Mgbanwe a na-ewe ihe dịka ụzọ abụọ n'ụzọ iri nke abụọ ma ntị mmadụ enweghị ike ịhụ ya!
Ọ bụrụ na ndị otu ahia gị na-eji Salesforce ị nwere ike itinye data n'ime MonsterConnect Salesforce jikọtara ngwa ahịa akụrụngwa ahịa. MonsterConnect na-enye ntinye ntụgharị nke ga-ejikọ ngwa ahịa Salesforce gị na ngwa MonsterConnect na-akpọ oku akpaaka ngwanrọ.
Conversationsbawanye mkparịta ụka ndụ, B NOTGH di oku, na-abawanye ọgbọ mbu B2B
Njikọ Monster mma gị arụmọrụ management irè, enwekwu gị ahịa otu si oke mmepụta, na n'ụzọ dị irè penetrates gị isi akaụntụ. Ndị ahịa gị nwere ike ịnọ na ọrụ - ire ​​- ma enwere ike ịnye gị ezigbo usoro iji tụọ arụpụta ha. Agakwaghị enwe ndị ahịa gị ga-enwe ụbọchị ọjọọ n'ihi na ha enweghị ike ijide onye ọ bụla… ugbu a, ha ga-enweta atụmanya ụbọchị niile ma mee ihe ha dị oke egwu na…
Njikọ Monster bụkwa onye nkwado ọhụrụ na Martech Zone!
Tags: akpaaka-akpọ okuakpaaka dialer teknụzụb2bb2b ndu genb2b ndu ọgbọb2b ahịaB2B na-ebute ọgbọ ahịateknụzụ ịpịdị ndụ gị n'ụlọngaogologo anụ jikọọnjikọ anụ ọhịaahịa oku teknụzụokuọrụ otu egwuregwuire ere ahịa
Finesse: Wụnye, Tinye Ngwaahịa, Mee Ego.
Jul 3, 2015 na 8: 48 AM
Ezigbo ihe !! Ngbanwe echiche dị mma. ịmụmụ ọnụ ọchị na ịkpọ oku adịghị mma ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta mkparịta ụka na nsọtụ nke ọzọ. M ga-asị na nke a bụ otu nnukwu nkụda mmụọ nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa, ozi olu na sistemụ menu akpaaka na-eri oge oge…